Valan’aretina soca: Ahoana no famolavolan’ny COVID-19 ny feon’ny Karnavaly nofoanana ao Trinidad & Tobago · Global Voices teny Malagasy
"Nihiboka ao an-tsainao ianao? Inona no mitranga ao an-tsainao?
Voadika ny 13 Avrily 2021 5:07 GMT
Pikantsary avy amin'ny video ‘Backyard Jam’ avy amin'i Farmer Nappy, tao amin'ny JulianspromosTV | Soca Music tao amin'ny YouTube.
Efa lohahevitra mahazatra, tahaka ireo olana misy ao amin'ny firenena eny fa na manerantany aza izay mahaliana ny vahoaka ny feonkiran'ny karnavalin'i Trinidad sy Tobago, indrindra rehefa tafiditra ny hira calypso. Avy amin'izany dia mitombo avy roa heny ho tsangambato manantantara ny lisitry ny hiran'ny karnavaly, miaraka amin'ny fahefana hampifantoka anao amin'ny fotoana sy toerana, manomboka amin'ny politika hatramin'ny ady lehibe manerantany.
Mozika Soca, fametrahana palitao azo avy amin'ny “fanahin'i calypso,” dia fankalazana ny atao hoe calypso amin'ny fanehoan-kevitra ara-tsosialy, saingy talohan'ny fahatongavan'ny areti-mifindra COVID-19, matetika manaraka ny fitarihan'ny calypso, no sady mametraka ny soniany fetibe ao amin'izany ity endrika malaza be ity, miaraka amin'ny kojakojany rehetra (anisan'izany ny chutney soca).
Na eo aza ny fanafoanana ny Fetibe Karnavaly 2021 tao Trinidad sy Tobago, dia mbola namoaka fitaovana vaovao ireo mpanakanto, maro amin'izy ireo no mifandraika amin'ny COVID. Ity misy fijery (ary henoy) ny sasany amin'ireo tolotra tsara indrindra hatramin'izao.
Okay, noho izany dia tsy miresaka ara-teknika momba ny areti-mandringana ity hira ity. Tahaka ireo sakafo soca be dia be, mampisongadina ny hasin'ny fahafahan'ny vehivavy mandresy izany — ilay dihy manintona izay marika famantarana ny fety — nofaritana ho “mihozongozona toy ny sambo an-dranomasina.” Milaza izany fa ny lohaten'ilay hira dia zavatra ahafahan'izay olona rehetra mirindrina noho ny COVID-19 mamantantra ny tenany; manome endrika tsara kokoa ny feo (sy horonan-tsary mahafinaritra, nalaina tamin'ny fitsangantsanganana an-tsambo).
‘Horn Proof’ — Kells sy Sekon Sta
“Misy olona voasioka fanairana ao anaty fitokana-monina; ny zavatra iray azo antoka aloha dia ny anjomara fanairana (izany hoe tsy mahatoky _ infidele) “: lohahevitra tsy mety lefy amin'ny mozika soca ny “anjomara fanairana” , ka mba hampalaza azy ankehitriny, maninona raha dinihina ny “fitahan'olon-tiana” izay misy hatrany na eo aza ny ny fepetra fanalavirana ara-tsosialy ilaina tanterahana?
Ho amin'ny fahamendrehany, manohy manoro hevitra ireo torotoro fo ny hira mba hitantana ny “anjomara fanairana” amin'ny fahamatorana ary tsy hanao zavatra kinanga, fanekena amim-pahatsiarovan-tena ny zava-misy fa niaina fitomboan'ny herisetra mifototra amin'ny miralenta i Trinidad sy Tobago, ary koa pi-maso amin'ireo fakan'ny calypso an'ny soca amin'ny fampiasana ny mozika mba hamahana ny olana ara-tsosialy manindry.
Azo iadian-kevitra fa nahita ny fomba iray iaingana indray ilay artista soca nahomby indrindra manerantany, Machel Montano. Amin'ity feon-kira ity, dia manasa ireo mpankafy karnavaly rehetra izy hanaiky ny fanovana nentin'ny areti-mifindra ary hankafy ny fety amin'ny fomba hafa: “Manao fety ao an-trano aho, omeo ahy ny kaody fidirana […] ny efitrano fandraisam-bahiny no kianja filalaovako, jereo fa mivadika kianja izany. “Raha atao teny hafa, mamony amin'ny toerana nambolenao (na raha amin'ny fiteny amin'ny areti-mandringana, manaova fety ao amin'ny toerana anokana-monina anao).
Ny areti-mandringana, tamin'ny lafiny maro, dia namerina ny fetibe nasionaly indray tamin'ny fotony, voafintina amin'ity feon-kira manintona sy mahafinaritra ity izay mampiseho ny embona taloha rehetra momba ny fomba tsotra sy marina amin'ny fankalazana: “Tsy mila mpanentana lehibe isika, fa ny mpifanila vodi-rindrina no ho mpanohana antsika. “Tononkalo iray amin'ny fahatsorana sy ny faharetan'ny kolontsaina eo an-toerana sy ireo izay mahatakatra fa ny Karnavaly dia mihoatra lavitra noho ny loharano fidiram-bola.
Ity feon-kira ity kosa miresaka momba ny faharetana sy ny famoronana indray ao anatin'ny indray mandeha: “Nihiboka tao an-tsainao ianao? Inona no mitranga ao amin'ny fisainanao? […] Na dia irery aza aho, dia tsy mijanona mihitsy ny Fetibe!” Porofo manamarina izany fa miaina ao anatin'ny Trinbagoniana tsirairay ny fetibe nasionaly, lelafo izay tsy voavonon'ny areti-mandringana.
Tabanca, na manina izay zavatra lasa, no zavatra iray itoloman'ny mpiondana Karnavaly maro amin'ity taona ity. Ampahany mahatonga ny fetibe fanao isa-taona ho iankinan'ny ain-dehibe dia noho izy io fantsona andosirana amin'ny tsindrin'ny fiainana andavanandro. Ity lahatsary ireo manoritsoritra an'i Iwer George, olona iray tratran'ny COVID mitolona miaraka amin'ny mpiasan'ny fahasalamana fony izy nentina teny amin'ny hopitaly- manao ny fomba rehetra hidirana ao amin'io kolontsain'ny fahafinaretana io: “Manao izay tsy maintsy ataonay izahay, fa henoy izay tiako hatao! Raha manana faniriana iray aho, dia ataoko izay hidirako amin'ilay toerana, fety iray hafa indray dia hotratrariko ilay toerana! “ Fanehoan-kevitra hatsikana mamirapiratra momba ny fifehezana ny fepetran'ny areti-mandringana izany, mandritra ny vanim-potoana iray, amin'ny maha-izy azy indrindra, tia fahafinaretana tsy voafehy.
Raha mbola miady amin'ny valan'aretina manerantany izao tontolo izao, dia sarotra ny maka sary an-tsaina ny fiainana aorian'ny COVID-19, saingy manome fanantenana ho amin'ny hoavy ity hira ity: “Ho tonga, ho tonga ny andro tsara kokoa … ovay ny lalanao; aza avela handalo foana izao fotoana izao ary mitoera ho izao hatrany [aza miova].” Mitovy amin'izany ihany, ‘God Is Ah Trini’ an'i Swappi mampiasa oha-pitenenana mahazatra hamantsika ny hafany fa hihatsara ny toe-javatra, ary ho ao tsara i Trinidad sy Tobago—sy ny Karnavaliny—.
Nizeria 15 ora izay
Nizeria 24 ora izay